China QF-JX-300 China ICU Pendant Bridge misaraka amin'ny Bridge ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy hopitaly | Wanyu
Ity pendant tetezana ara-pahasalamana ity dia azo foronina ho maody roa, faritra maina sy faritra mando atambatra miaraka na sarahina.
Ny fizarana lena dia miaraka amina sehatra fitaovana maro sosona. Izy io dia miaraka amina paompy syringe ary tsorakazo fampidirana. Ny faritra maina dia miaraka amina sehatra fitaovana maro sosona ary azo ahitsy ny haavon'ny vatasarihana.
Ny lasantsy ara-pitsaboana, suction, famatsiana herinaratra ary fantsom-pamoahana tambajotra dia napetraka ao amin'ny faritra maina sy lena ao anatin'ny tratran'ny mpiasan'ny fitsaboana.
1. efitrano fitsaboana lehibe
2. Wards rehetra
3. Efitra fanarenana
1. Fitaovana matanjaka be
Ny tetezana dia vita amin'ny alimina alimina matanjaka be. Izy io dia manana fahaiza-manao matanjaka.
Ny famolavolana lalamby mihetsiketsika dia mahatonga ny fivezivezin'ny tilikambo ho milamina kokoa, ary koa mahatonga ny mpiasan'ny fitsaboana hitahiry asa bebe kokoa.
3. Jiro LED malefaka
Ny loharano jiro LED dia namboarina teo amin'ny vatan'ny pendant tetezana ara-pahasalamana hanomezana tontolo iasana tsara ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana.
4. Rafitra maodely
Ny famolavolana rafitra maoderina dia afaka mamaly ny filàna fanavaozana amin'ny ho avy ary mora amin'ny fikojakojana.
5. Volavola fanasarahana solika-herinaratra
Ny famolavolana fisarahana entona-jiro dia miantoka ny fampiasana azo antoka.
Ny tsipika herinaratra sy ny fantsom-pamokarana rivotra dia tsy hivily lalana na hianjera tampoka noho ny fihodinan'ny pendant.
6. Fivoahan'ny gazy maharitra
Loko sy endrika tsy mitovy amin'ny fampifangaroana entona hisorohana ny fifandraisana diso. Famehezana faharoa, fanjakana telo (on, off, ary esory), in-20 000 mahery ampiasaina. Azo tazomina tsy misy rivotra maty.
Ny halavan'ny tetezana: 2200-3200mm
Ny halavan'ny faritra maina: 550mm
Ny halavan'ny faritra mando: 550mm
Zoro fihodinan'ny faritra maina: 350 °
Zoro fihodinan'ny faritra mando: 350 °
Fahaiza-mitondra amin'ny tetezana: 600kgs
Mitondra ny fahafahan'ny faritra maina: 280kgs
Mitondra ny fahafahan'ny faritra mando: 280kgs
Miankina amin'ny filàna izany
Fivoahan'ny gazy mandatsa-dranomaso
Gas Gas outlet
Syringe Pump Combinat talantalana
Harona Stainless vy
Previous: LEDD700 Ceiling Type LED Single Arm Operation Light miaraka amin'ny Video Camera
Manaraka: TS-DQ-100 pendant endoskopika medika elektrika roa avy amin'ny orinasa
ZD-100 ICU nampiasa pendant medaly medaly ho an'ny Hos ...